ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ်အကျိုးကျေးဇူးရချင်တယ်ဆို ရေသောက်တတ်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ် 🤔 – Trend.com.mm
Posted on August 15, 2018 by Noel
ဂျပန်လူမျိုးတွေက အသက်ပိုရှည်ပြီးကျန်းမာနုပျိုကြတာ အားလုံးသိထားတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပါ။သူတို့က ကျန်းမာကြသလို အသားအရည်ကအစလှပနေပါတယ်။သူတို့ဘာလို့ အခုလိုနုပျိုကျန်းမာလှပနေကြလဲလို့ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ မနက်မိုးလင်းလို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ
ပထမဆုံးလုပ်တာက ရေသောက်တာပါပဲတဲ့။ပြီးတော့မှ မျက်နှာသစ်၊သွားတိုက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြတာပေါ့။
တစ်ခြားလေ့လာချက်တွေအရလည်း ဒီရိုးရှင်းတဲ့နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်လေးတစ်ခုဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရလာစေတယ်။ဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စာဖတ်သူတွေအတွက်လည်း မနက်မိုးလင်းလို့ နိုးလာတဲ့အခါတိုင်း ဘာမှမလုပ်သေးပဲ ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်သောက်ပေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ရေသောက်တာပဲ ဘယ်အချိန်သောက်သောက် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတွေးနေမိနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့အစာအိမ်ထဲမှာ အစားအစာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အချိန် ရေတစ်ခွက်သောက်ပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်လဲ?
*မနက်မိုးလင်းလို့နိုးလာတဲ့အခါ ပထမဆုံးရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုသောက်လိုက်ပါ။ဒီလိုသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့ရပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အရင်ကထက် ပိုပေါ့ပါးလာပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကင်းစင်သွားသလို ပေါ့ပါးနေပါလိမ့်မယ်။
*အရင်လို တစ်နာရီခြားတစ်ခါဗိုက်ဆာနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ပဲ နည်းနည်းလေးစားတာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝသွားသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။သရေစာစားနေကျအချိန်မှာလည်းဗိုက်မဆာတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
*မနက်တိုင်း ဗိုက်ထဲမှာအစာမရှိချိန်ရေပုံမှန်သောက်ပေးသွားမယ်ဆိုရင် အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်လာစေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်လာပါတယ်။အရင်လိုအများကြီးမစားဖြစ်တော့ပေမဲ့ အားပြတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိပဲ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွမ်းအင်တွေပြည့်နေစေမှာပါ။
*ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီလှည့်ကွက်လေးတစ်ခုက သင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုပိုပြီးစိုပြည်လာစေနိုင်ပါတယ်။အသားအရည်မွဲခြောက်တဲ့သူဆို မနက်တိုင်းရေတစ်ခွက်ပုံမှန်သောက်ပေးပါ။တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါ အသားအရည်က စိုပြည်ကျန်းမာလာတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။နဂိုအသားအရည်
ကောင်းတဲ့သူဆို အရင်ကထက် ပိုပြီးအသားအရည်က ကြည်လင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဆံပင်တွေလည်းအရင်လို သိပ်မကျွတ်တော့ပဲ တောက်ပလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
*ဗိုက်ထဲမှာအစာလုံးဝမရှိတဲ့အချိန် ရေသောက်ပေးတာက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပါကောင်းမွန်စေပါတယ်တဲ့။နေ့တိုင်းပုံမှန်သောက်ပေးသွားတဲ့အခါ မကြာခဏဖျားလေ့ရှိတဲ့သူ၊အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အစားစားပြီးတိုင်းရင်ပြည့်သလိုရင်ကယ်သလိုဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေတောင် အဲ့ဒီလိုမဖြစ်တော့တာကို
တကယ်တော့ ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်သောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေဖန်ခွက်လေးခွက်စာကို မနက်မိုးလင်းလို့ သွားမတိုက်ရသေးခင်၊မျက်နှာမသစ်ရသေးခင်၊ဘာမှမစားရသေးခင်သောက်ခိုင်းတာပါ။ရေဖန်ခွက်လေးခွက်ကျတော့ စစချင်းဘယ်လိုမှမ၀င်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ပထမဆုံးရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့စပြီးနောက်ရက်တွေမှာတစ်ခွက်ချင်းတိုးတိုးသွားပါ။မနက်တိုင်းရေဖန်ခွက်လေးခွက်စာသောက်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။လေးခွက်ထိမသောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် နှစ်ခွက်တော့အနည်းဆုံးသောက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ရေသောက်ပြီး နောက်ထပ် ၄၅မိနစ်ထိ ဘာမှမစားပါနဲ့။
၄၅မိနစ်ပြည့်ရင်တော့ ပုံမှန်စားနေကျအတိုင်းမနက်စာ စားနိုင်ပါတယ်။
သတိထားရမှာက မနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာစားပြီး နောက်ထပ် ၂နာရီအတွင်း ရေသောက်တာမျိုး၊အစားထပ်စားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။အစာချေစနစ်တွေမှားယွင်းသွားရင်တော့ ဒီလိုအကျိုးရလဒ်မျိုးရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
ဒီလိုမျိုး နေ့တိုင်းပုံမှန်လိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင် တစ်လအတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားမှုတွေကို တွေ့လာရမှာပါ။
ဂပြနျလူမြိုးတှကေ အသကျပိုရှညျပွီးကနျြးမာနုပြိုကွတာ အားလုံးသိထားတဲ့အမှနျတရားတဈခုပါ။သူတို့က ကနျြးမာကွသလို အသားအရညျကအစလှပနပေါတယျ။သူတို့ဘာလို့ အခုလိုနုပြိုကနျြးမာလှပနကွေလဲလို့ လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော မနကျမိုးလငျးလို့နိုးလာတဲ့အခြိနျမှာ
ပထမဆုံးလုပျတာက ရသေောကျတာပါပဲတဲ့။ပွီးတော့မှ မကျြနှာသဈ၊သှားတိုကျသနျ့ရှငျးရေးလုပျကွတာပေါ့။
တဈခွားလလေ့ာခကျြတှအေရလညျး ဒီရိုးရှငျးတဲ့နစေ့ဉျအလအေ့ကငျြ့လေးတဈခုဟာ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီးကောငျးမှနျတဲ့ရလဒျတှရေလာစတေယျ။ဆိုတာကိုလလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့စာဖတျသူတှအေတှကျလညျး မနကျမိုးလငျးလို့ နိုးလာတဲ့အခါတိုငျး ဘာမှမလုပျသေးပဲ ရဖေနျခှကျတဈခှကျသောကျပေးပါလို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။ရသေောကျတာပဲ ဘယျအခြိနျသောကျသောကျ ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးတာပဲဆိုပွီးတှေးနမေိနိုငျပါတယျ။တကယျတော့အစာအိမျထဲမှာ အစားအစာတဈခုမှမရှိတဲ့အခြိနျ ရတေဈခှကျသောကျပေးတာက ကနျြးမာရေးအတှကျပိုပွီးအကြိုးရှိပါတယျ။ဒါဖွငျ့ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရေလာနိုငျလဲ?
*မနကျမိုးလငျးလို့နိုးလာတဲ့အခါ ပထမဆုံးရဖေနျခှကျတဈခှကျကိုသောကျလိုကျပါ။ဒီလိုသောကျပေးမယျဆိုရငျ တဈပတျလောကျကွာတဲ့အခါထူးခွားမှုတဈခုတှရေ့ပါမယျ။ဘာလဲဆိုတော့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက အရငျကထကျ ပိုပေါ့ပါးလာပွီး လနျးဆနျးတကျကွှနပေါလိမျ့မယျ။ခန်ဓာကိုယျထဲမှာပွညျ့နတေဲ့အဆိပျအတောကျတှကေငျးစငျသှားသလို ပေါ့ပါးနပေါလိမျ့မယျ။
*အရငျလို တဈနာရီခွားတဈခါဗိုကျဆာနတောမြိုးမဖွဈတော့ပဲ နညျးနညျးလေးစားတာနဲ့အာဟာရပွညျ့ဝသှားသလို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။သရစောစားနကေအြခြိနျမှာလညျးဗိုကျမဆာတာကိုသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။
*မနကျတိုငျး ဗိုကျထဲမှာအစာမရှိခြိနျရပေုံမှနျသောကျပေးသှားမယျဆိုရငျ အစာခစြေနဈကိုကောငျးမှနျလာစတေဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခတြဲ့အခါမှာလညျးအသုံးဝငျလာပါတယျ။အရငျလိုအမြားကွီးမစားဖွဈတော့ပမေဲ့ အားပွတျသှားတာမြိုးလညျးမရှိပဲ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကိုစှမျးအငျတှပွေညျ့နစေမှောပါ။
*ဘာမှမဟုတျတဲ့ဒီလှညျ့ကှကျလေးတဈခုက သငျ့ရဲ့အသားအရညျကိုပိုပွီးစိုပွညျလာစနေိုငျပါတယျ။အသားအရညျမှဲခွောကျတဲ့သူဆို မနကျတိုငျးရတေဈခှကျပုံမှနျသောကျပေးပါ။တဈလလောကျကွာတဲ့အခါ အသားအရညျက စိုပွညျကနျြးမာလာတာကိုသတိထားမိပါလိမျ့မယျ။နဂိုအသားအရညျ
ကောငျးတဲ့သူဆို အရငျကထကျ ပိုပွီးအသားအရညျက ကွညျလငျလာတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ဆံပငျတှလေညျးအရငျလို သိပျမကြှတျတော့ပဲ တောကျပလာတာကိုတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
*ဗိုကျထဲမှာအစာလုံးဝမရှိတဲ့အခြိနျ ရသေောကျပေးတာက ကိုယျခံစှမျးအားကိုပါကောငျးမှနျစပေါတယျတဲ့။နတေို့ငျးပုံမှနျသောကျပေးသှားတဲ့အခါ မကွာခဏဖြားလရှေိ့တဲ့သူ၊အစာအိမျနဲ့ပတျသကျလို့ အစားစားပွီးတိုငျးရငျပွညျ့သလိုရငျကယျသလိုဖွဈတတျတဲ့သူတှတေောငျ အဲ့ဒီလိုမဖွဈတော့တာကို
တကယျတော့ ရဖေနျခှကျတဈခှကျသောကျရမှာမဟုတျပါဘူး။ရဖေနျခှကျလေးခှကျစာကို မနကျမိုးလငျးလို့ သှားမတိုကျရသေးခငျ၊မကျြနှာမသဈရသေးခငျ၊ဘာမှမစားရသေးခငျသောကျခိုငျးတာပါ။ရဖေနျခှကျလေးခှကျကတြော့ စစခငျြးဘယျလိုမှမဝငျပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ပထမဆုံးရတေဈဖနျခှကျနဲ့စပွီးနောကျရကျတှမှောတဈခှကျခငျြးတိုးတိုးသှားပါ။မနကျတိုငျးရဖေနျခှကျလေးခှကျစာသောကျနိုငျရငျအကောငျးဆုံးပါပဲ။လေးခှကျထိမသောကျနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျ နှဈခှကျတော့အနညျးဆုံးသောကျပေးပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။
ပွီးတော့ ရသေောကျပွီး နောကျထပျ ၄၅မိနဈထိ ဘာမှမစားပါနဲ့။
၄၅မိနဈပွညျ့ရငျတော့ ပုံမှနျစားနကေအြတိုငျးမနကျစာ စားနိုငျပါတယျ။
သတိထားရမှာက မနကျစာ၊နလေ့ညျစာ၊ညစာစားပွီး နောကျထပျ ၂နာရီအတှငျး ရသေောကျတာမြိုး၊အစားထပျစားတာမြိုးမလုပျပါနဲ့တဲ့။အစာခစြေနဈတှမှေားယှငျးသှားရငျတော့ ဒီလိုအကြိုးရလဒျမြိုးရလာမှာမဟုတျပါဘူးနျော။
ဒီလိုမြိုး နတေို့ငျးပုံမှနျလိုကျနာသှားမယျဆိုရငျ တဈလအတှငျး သငျ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပတျသကျလို့ထူးခွားမှုတှကေို တှလေ့ာရမှာပါ။